समाज – Nepal Trending
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २८ भाद्र २०७६, शनिबार १०:३० 0
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २८ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:३४ 0
विद्युतको झट्काले काटेपछि रुपाको सहारामा हिड्ने कृष्ण, आज आफ्नै…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ७ असार २०७६, शनिबार १५:१७ 0
काठमाडौं । राजधानीकै एक दम्पती । बिहे भएको लामै समय बितिसकेको थियो । एक दिन पतिले पत्नीलाई आफ्ना गोप्य क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्ने प्रस्ताव गर्छन् । पत्नी सुरुमा त आनाकानी गर्छिन् । तर, पतिले आफ्ना गोप्य क्षण अविस्मरणीय बनाउने भन्दै…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ३ असार २०७६, मंगलवार २०:५० 0
स्याङ्जा । स्याङ्जामा बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढेको छ । बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढेको ग्रौघ्याङ्लिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी रेनुका शर्माले जानकारी दिएकी छन्…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २२ बैशाख २०७६, आईतवार १५:०८ 0
मोरङ : भैंसी करणी (बलात्कार) गरेको आरोपमा मोरङको रतुवामाइ नगरपालिका–२ का ४० वर्षीय मङ्गल हस्दा विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । स्थानीय रानी टुढुले पालेको भैंसीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको हो । छिमेकी टुढुको गोठमा बाँधिएको…
बेलायतमा रहेका प्रेमीसँगको सेक्स क्लिप बाहिरिएपछि यी युवतीलाई यस्तो तनाब…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २० बैशाख २०७६, शुक्रबार २१:४९ 0
काठमाडौं । प्रेमिका छाडेर आयुष बेलायत जानुपर्यो । डेढ वर्ष भइसकेको थियो, सरितासँग उनको मनसँगै देह साटिएको । भौतिक रुपमा टाढा भए पनि मानसिक रुपमा दुवै नजिक थिए । शरीर न हो, यौन सुख खोज्यो नै । दुवैले यौन सुख मेट्न भिडियो च्याटको सहारा लिए ।…
आफ्नै घरभित्रै शंकास्पद मृत भेटिइन् सरिता : शरीरभरी निलडाम, श्रीमान फरार ! आफन्त प्रहरी नियन्त्रणमा
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १४ बैशाख २०७६, शनिबार १३:२३ 0
काभ्रेपलाञ्चोक । निक्कै मेहनती छिमेकी बिहान ९ बजेसम्म नउठ्दा काभ्रेको सिपाघाटका स्थानीय अचम्ममा परे । शुक्रवार बिहान ९ बजेसम्म लैनो गाई दुहुनु पर्नेमा नदोहेपछि गाई कराउन थाले । त्यसपछि स्थानीयहरु मण्डनदेउपुर–६ सिपाघाटकी २५ बर्षिया सरिता…
रिनाको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा बलत्कारपछि हत्या भएको देखिएन
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १२ बैशाख २०७६, बिहीबार २२:०३ 0
काठमाडौं । गत शनिबार विहान मोरङको पथरी १ मा नग्न अवस्थामा मृत भेटिएकी रिना बस्नेत (रुपा) को मृत्यु बारेमा प्रहरीले नयाँ रहस्य सार्बजनिक गरेको छ । प्रहरीकाअनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट रिनाको पोष्टमार्टमको…
मसाज सेन्टरमा अवैध धन्दा ! ३० मिनेटपछि युवती सोध्छिन् एक्स्ट्रा…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १३:११ 0
‘यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने ? थाई, स्वीडिश,…
बसमा आपत्तिजनक हर्कत गरेको भिडियो भाइरल, प्रहरी भन्छ– ‘कुनै उजुरी परेको छैन’
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ११ माघ २०७५, शुक्रबार १२:४९ 0
काठमाडौं । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाईरल बनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा कम गर्न भन्दै प्रहरीले विभिन्न अभियान सञ्जालन गरेपनि उक्त भिडियोबारे प्रहरी मौन छ । काठमाडौंमा सञ्चालित…
फेसबुक जनमत, अबको ५ बर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाइहरु कसलाई देख्न चाहानुहुन्छ ?
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ३ माघ २०७५, बिहीबार २२:५६ 0
फेसबुक जनमत ! अबको ५ बर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाइहरु कसलाई देख्न चाहानुहुन्छ ? काठमाण्डौं । हामी आम नेपालीहरुको एउटै चाहाना नेपाल देश समृद्ध होस् । क्षमता भएका युवाहरु आफ्नो परीवारको जिवन निर्भाह गर्नको लागि परदेशी भुमीमा जान…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २६ पुष २०७५, बिहीबार १६:२३ 0
काठमाडौं । मानिस जन्मदै मृत्यु लेखिएको हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएका कुरा स्वीकानै पर्छ । यो कसैले टार्न र सार्न नसक्ने ध्रुब सत्य कुरा हो । बिज्ञान प्रविधिको विकाससँगै जन्मने दिन र समय समेत एकीन गर्न सकिन्छ तर मृत्यु कसैले जान्दैन…